Ogaden News Agency (ONA) – Weeraro xalay lagu qaaday Xerada Buundada ee Magalada Qabridahar iyo dagalo kale.
Weeraro xalay lagu qaaday Xerada Buundada ee Magalada Qabridahar iyo dagalo kale.
Waxaa adag in lahelo khasaaraha inta badan ka dhasha weerarada lagu qaado xeryaha gumaysigu uu kasamaysto Magaalooyinka Ogaadeeniya, maadaama aan loo ogolayn saxaafada wadanka Ogaadeeniya,
Iyadoo ay jirto Maahmaahdii ahayd “Axmaaro Jabkeeda way qarsataa”
Dagaaladii ugu danbeeyay ee nagasoo gaadha Gudaha Ogadeniya ee dhexmara ciidamada daalan ee Gumeyisga iyo Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeniya ayaa waxay ukala dhaceen sidan hoose:
Saqdii dhexe ee xalay markii ay taariikhdu kala wareegtay ahaydna 19/06/2012 ayaa waxaa weerar mir ah lagu e keeyey xerada Buundada ee kutaala magaalada Qabridahar waxaana weerarkaasi loogu gaystay askarta gumaysgia khasaare lixaadleh,
18/06/2012 Deegaanka Muga oo u dhaw magaalada Qabridahar ee xarunta Gobolka Qorahay weerar si heer sare ah loo qorsheeyey ayaa waxaa lagu qaaday Askar daalan oo kamid ah kuwa gumaysiga oo deegaankaasi joogay waxaana lagaga dilay 10 askari iyadoo dhaawacuna uu intaasi kabadanyahay.
14/06/2012 dagaal kadhacay deegaanka Biya-janaale oo sagag udhow waxaa askarta gumaysiga lagaga dilay 2 askari halka 5 kalana lagaga dhaawacay.
10/06/2012 Deegaanka Sammu oo udhow Magaalada Dannood ee Gobolka Doollo weerar gaadmo ah oo si cilmeiyeesan loo gu qaaday askarta gumaysiga oo deegaankaasi joogay ayaa waxaa lagaga dilay askarta mooraalka jabsan ee gumaysiga 7 askari halka dhaawacuna uu yahay 12 kale.
Maashaa allaah illaahay ha u kaalmeeyo Mujaahidiinta JWXO
runtii waa arin lagu farxo jabka soogaadhay gumaysiga Ethiopia